Taariikh: Orodyahankii hore ee Cabdi Guuleed Cali | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Taariikh: Orodyahankii hore ee Cabdi Guuleed Cali
Taariikh: Orodyahankii hore ee Cabdi Guuleed Cali
Himilo FM –Cabdi Guuleed Cali waxa uu ku dhashay magalaada Buula Barde ee gobalka Hiiraan sannadkii 1950-kii, waxa uu ku barbaraay isla degmadaasi isaga oo halkaasi kaga aflaxay dugsi Qur’aan kaddib waxa uu u wareegay waxbarashada maadiga.
Bishii Febraayo sanaddii 1970-kii ayuu ku soo biiray ciyaaraha orodada, waxa uu u ciyaaray gobalka Hiiraan isaga oo kamid noqday orodka 5000 Mitir kaddib waxa uu kamid noqday ciyaartoyda orodada 5000 illaa 10,000 ee naadiga Horseed qeybteeda labaad.
Bishii Agoosto 1971-kii waxa uu 10,000 Mitir kaga qeyb galay ciyaaro lagu qabtay dalka Zambia tartanka bariga iyo bartmaha Afrika.
Sanaddii 1973-kii ciyaar saaxiibtinimo oo lagu qabtay garoonka Koonis ayuu oradka 1500 ka galay kaalinta koowaad. Sanaddii 1975-kii waxa uu ka qeyb galay tababar ku saabsanaa sare u qaadista ciyaartoyda safarkaasi oo qaatay afar billood.
1975-kii waxa uu tartan kaga qeyb galay magaalada Mombasa ee dalka Kenya, waxa uu fariistay kaalinta afaraad. 1976-kii waxa uu tartan ugu qeyb galay dalka Russia balse wax natiijo kama helin. Sanaddii 1977-kii dalka Ciraaq ayuu ciyaar saaxiibtinnimo la dheelay, kaalin ayuu ka galay isaga oo ku guuleystay billad qalin ah, orodka 1500 iyo 800 Mitir.
Isla sannadkaasi waxa uu Muqdisho Stadium kaga qeyb galay orodka 800 mitir isaga oo fariistay kaalinta labaad kaddib markii uu ku orday hal daqiiqo iyo 46 il biriqsi: 1.46.
Sannadkii 1978-kii tartanka jaamacadda carabta ayuu ka qeyb galay waxa uu ku guuleystay orodka 1500 iyo 3000 waxa uu hantay laba billad oo dahab ah.
1979-kii tartan lagu qabtay Muqdisho Stadium ayuu guul ka gaaray kaddib 3000 uu kaalinta koowaad kaga soo baxay. 1980-kii tartanka ciyaaraha ciidamada ayuu dalka Ciraaq kaga qeyb galay isaga oo metalaya kooxda Horseed waxa uu orday 800-1500 isaga oo galay kaalinta labaad.
Sannadkii 1981-kii ayuu gabi ahaanba soo afmeeray xirfaddiisa orodka, kaddib waxa uu ku biiray xagga macallinimada, 1983-kii ayaa loo magacabay kooxda Horseed ee dhinaca orodada.
Qore: Maxamed Xasan Maxamed Owen.
Previous: Solari “Real Madrid waxay dooneysaa inay wajahdo Messi.”
Next: Maqal:- Casharka Tafsiirka Qur’aanka Idaacadda Himilo “Darsiga 271aad”